I-china 34 kanye ne-4 pin isixhumi abakhiqizi nabaphakeli UChapman
✭ Isixhumi singummeleli noma i-wrapper ezungeze i-API evumela insizakalo eyisisekelo ukuthi ikhulume neMicrosoft Power Automate, iMicrosoft Power Apps, kanye ne-Azure Logic Apps. Inikeza indlela yokuthi abasebenzisi baxhume ama-akhawunti abo futhi basebenzise isethi yezenzo ezakhiwe ngaphambilini nezimbangela zokwakha izinhlelo zabo zokusebenza nokugeleza komsebenzi.
✭ Ukunemba kwengxenye yepulasitiki kuphakeme kakhulu, futhi isikhundla sokumatanisa sidinga ukwenziwa ngaphakathi kokubekezelelana okungu-0.01-0.02mm. Impahla yayo i-LCP impahla engacimi umlilo i-V0.
✭ Lo mkhiqizo udinga ukukhiqizwa umshini wokubumba umjovo wesivinini esikhulu, onomjikelezo omfishane womjovo nokunemba okuphezulu komkhiqizo. Umjikelezo womjovo kufanele ulawulwe ngaphakathi kwemizuzwana eyi-15-25 ukuqinisekisa ukuthi usayizi ngamunye womkhiqizo uyahambisana.
✭ Izidingo zesikhunta nazo ziphakeme kakhulu, futhi isikhundla setheku lokuxhuma lomkhiqizo sidinga ukwenziwa ngokufakwa okuhlukile kwesikhunta, futhi ukubekezelelana kokufakwa ngakunye kufanele kuqinisekiswe ngaphakathi kwebanga lokubekezelelana le-0.005mm.
Isikhunta CHA. I-CPM-150220
Izinto zepulasitiki I-LCP
Ingxenye isisindo 3.5g
Usayizi wengxenye 48.00 * 14.1 * 8.2 mm
Usayizi isikhunta 250 * 300 * 321mm
Ingxenye Igama Isixhumi se-pin esingu-34 no-4
Isikhunta Cavity 1 * 4
Umgijimi Umgijimi obandayo wesango elincane
Isikhunta Material I-S136 / S50C / S-7
Isikhathi esiholayo Izinsuku ezingama-25
Isikhunta Isikhathi Sesikhathi: 16's
1.Contacts ngomshini kusuka okuqinile ithusi ingxubevange negolide plated
Ama-2.Izihlanganisi nemizimba yesamukeli iyatholakala nge-aluminium emnyama ene-anodized, inayiloni noma insimbi engenasici ；
Ama-plugs abunjwe kukhebula elengeziwe elenza izinto ukwakha isakhiwo esisodwa
Ama-plugs anikezwe iringi yokushayisana yensimbi evimbela ukuwohloka kwenjoloba nokwandisa ukumelana nokudonsa pull
Ama-Receptacles afakwa egobolondweni nge-grade grade epoxy ；
Izikhonkwane ze-6.Amadoda zinophawu lukakhokho olubunjiwe phansi koxhumana naye ngamunye oqinisekisa uketshezi oluqinile noluthuli lapho kutholakala amayunithi
7.Kuyadingeka ukuqinisekisa ukuqondaniswa okufanele lapho kuhlanganiswa amayunithi wabesilisa nabesifazane ；
Iphinikhodi ye-Ground iyanwetshwa eqinisekisa ukuxhumana okuphephile ngogesi ngoba iyiphini yokuqala yokuzibandakanya futhi eyokugcina ekuhlukaniseni ；
Izixhumi nezintambo ngeke zigoge noma zikhubaze kule ndawo ephezulu yokushisa.
Langaphambilini Idivayisi yokulinganisa ithempelesha
Olandelayo: Ikhava yangemuva yabalandeli
Ikhava yegiya lokuqondisa elincane elincane